मगरात विनाको नयाँ नेपाल हामीलाई स्वकार्य छैन– अध्यक्ष रोका
Created on Sunday, 26 June 2016 05:08
-गणेश बहादुर थापा
नेपाल मगर संघ सम्पर्क समन्वय केन्द्रिय समितिले आइएलओ १६९ क्षमता अभिवृद्धि एक दिने प्रशिक्षण र नेपाल मगर संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रुपमा नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेको आइएलओ १६९ बारे एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम र सम्मान कार्यक्रम काठमाडौंको अनामनगरस्थित सामाजिक विकास भवनमा सम्पन्न गरेको हो ।
नेपाल मगर संघ केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोका मगरको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरुमा उपाध्यक्ष गंगा खासु मगर, महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, विदेश विभाग सचिव रक्षा बहादुर रैका मगर, संयुक्त मगर मंचका संयोजक पूर्ण घर्ति मगर, पूर्व सभासद राम बहादुर थापा मगर, अधिवक्त गौबहादुर आले मगरलगायत रहेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नविन रोका मगरले सम्बोधन गर्दै भने–‘देश सम्पूर्ण समुदायको साझा बन्छ कि बन्दैन । संविधान सबै जातजाति, वर्गको साझा दस्तावेज बन्छ कि बन्दैन । मगर समुदाय नेपाली नागरिक हो कि होइन ? यदि मगर नेपाली नागरिक होइन भने सिंहदरवारका शासकहरुले खुलेर भन्नुप¥यो । त्यसपछि गरौंला आमने सामने हिसाब किताब । मगर समुदाय यो देशको विरुद्धमा होइन, यो माटोको विरुद्धमा होइन, यो समाजको विरुद्धमा होइन' ।
अध्यक्ष रोकाले भने–‘यो देशमा परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी रगत मगर समुदायले बगाएको छ । त्यस कारणले देशको माया हुनेले रगत बगाउछ, देशको माया नहुनेले रगत बगाउदैन हिसाब किताब यहाँबाट शुरु गरौं । नेपाल मगर संघको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एकृकित मगरात, पहिचानसहितको संघीय नेपालको माग गरिसकेको छ ।
मगराँत पहिचान र मगर अधिकार र नेपालको उत्पीडित जातजातिको विरुद्धमा कुनै सम्झौता हुनेवाला छैन । त्यसका लागि कुन तहको आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, कुन तहको लडाई लड्नुपर्ने हो हामी मैदानमा हाजिर भैसकेकf छौं । हिजोसम्म हामी कुनै व्यक्तिका लागि लड्यौं, मरेउ होला ? कुनै शासकहरुको कुर्सीका लागि लडेउ होला । अब आफ्नो पहिचन सहितको सबै नेपालीहरुका लागि निर्णायक लडाई लड्नु पर्ने दिन नजिक आयो कि ? भन्ने हामीले महसुस गरिसकेका छौं ।
त्यसैले मगरातसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको विल्कुल विकल्प छैन । मगरात विनाको नयाँ नेपाल हामीलाई स्वकार्य छैन । नेपाल सहितको मगरात, मगरात सहितको नेपाल हामीले परिकल्पना गरिसकेका छौं । यो मुद्दा आज कुनै पार्टी, कुनै मगरले मात्र उठाएको होइन, राजनीतिक विद्रोह प्रथम शहीद लखन थापा मगरदेखि उठेको हो ।
त्यसकारणले अधिकार नपाए राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने यो विचार कसैले सिकाको होइन, महामानव प्रथम शहीद लखन थापा मगरले सिकाएको हो । हामी शहीदको सपनाको विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा, बलिदानीको विरुद्धमा कुनै हालतमा पाइला चाल्ने छैनौं ।
अहिले जारी संविधानले मगर भाषा, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक अधिकारको बारेमा कहाँ निर कुन धारामा बोलेको छ । विल्कुल बोलेको छैन । त्यसकारण मगरातका जनता, मगर जाति र मगर संघ अहिलेको संविधानको विरुद्धमा छ । जबसम्म मगरात पहिचान सहितको मगरात प्रदेश घोषणा हुदैन । जबसम्म बहुभाषिक नीति, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक नीति स्वकार्य गरिदैन, तबसम्म मगर जाति हजारौं पुस्तासम्म लड्न तयार छ ।
नयाँ संविधान मगर समुुदायको पक्षमा छैन– अधिवक्त लिम्बु
कार्यक्रममा आदिवासी अधिकारकर्मी एवम् कानून व्यवसायी शंकर लिम्बुले अन्तराष्ट्रिय श्रम महासन्धि आइएलओ नं. १६९, नयाँ संविधान २०७२ र मगर समुदायको अधिकार र आन्दोलनको बारे प्रशिक्षण दिनु हुदै अधिवक्त लिम्बुले भने–‘नयाँ संविधान २०७२ मगर समुदायले मान्ने कि नमान्ने प्रष्ट धारणा बनाउनु पर्छ । नयाँ संविधान मगर समुदायको पक्षमा छैन' ।
अधिवक्त लिम्बुले भने–‘नयाँ संविधान जारी भई सकेपछि देश दुई धु्र्वमा विभाजन भएको छ । एउटा धु्र्वले संविधान उत्कृष्ट छ, संविधान समानुपातिक छ, संविधानले गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गरेको छ भन्ने हिसाबले तर्क राखि रहेको छ । अर्को धुर्वले यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, महिलाको विरुद्धमा छ भनि रहेकोछ । यो संविधानलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन नआएका कारण यो संविधान विवादमा तानिएको छ ।
संविधान विवादित हुनुको कारण तीन कुरा रहेको छ । १-अन्तराष्ट्रिय समर्थन नहुनु, २-छिमेकी देशहरुको समर्थन नजनाउनु, ३-संविधान जारी हुनसाथ विरोध गर्ने ५५/५६ जनालाई गोली ठोकेर मार्नु । त्यसकारणले नयाँ संविधान माथि वैधानिक प्रशन चिन्ह उठेको छ ।
प्रशिक्षक लिम्बुले भने–‘यो संविधान जातिय आधारमा लेखिएको छ । यो संविधानमा ११ वटा प्रावधान आदिवासी जनजाति विरुद्धमा छ । २९ वटा संविधानको प्रावधानहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई विभेद गर्छ । र ४९ वटा प्रावधानले आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्छ । संविधानको धारा ४२ पढ्नुहोस त ? आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा १८ भाग बनाइएको छ । जसमा ५ भाग खासआर्य अर्थात क्षत्री, बाहुन, ठकुरी, दशनमी र सन्यासीलाई दिएकोछ । ५९ वटा जाति सुचिकृत भएकाहरुलाई भाग लाग्दैन । मधेशीको ३० वटा छ । जनजातिको ५९ बाट परिमार्जन गरेर ८० वटा बनाएको छ । तिनीहरुलाई भाग चाहिदैन ।
अर्को कुरा महिलालाई ३३ वटा कोटा छुटाएको छ । आदिवासी जनजाति महिला यो संविधानमा कहाँ छ ? पल्टाएर हेर्नुहोस त । ३०८ वटा धारामा आदिवासी जनजाति महिलाको कहाँ लेखिएको छ तर दलित महिलाको लेखिएको छ नि ?
संविधान जसले लेख्यो उसैका लागि उत्कृष्ट छ । प्रचण्ड, ओली, सिटौला, कोइराला जीको लागि संविधान उत्कृष्ट छ । तर मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिका लागि यो संविधान सबैभन्दा निकृष्ट छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा करिब २०० जना मगर समुदायको सहभागीता रहेको थियो ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिले सगरमाथाको चुचुरोमा मगर संघको ५ औं पटक झन्डा फहराउने ओखलढुङगाका कुल बहादुर मगरलाई सम्मान गरेको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य सचिव झविन्द्र बहादुर पुन मगर, अध्यक्षता जगत बहादुर रेश्मी मगर र संचालन महासचिव होमराज खपाङगी मगरले गरेका थिए ।